मेरो आईप्याड स्क्रिन क्र्याक गरिएको छ! यहाँ रियल फिक्स छ। - आईफोन
एचडीआर आईफोन क्यामेरा के हो?
आईफोन ब्याक अप छैन
प्राकृतिक तरिका ट्यूबल ligation उल्टाउन
कसरी वाईफाई बिना एप स्टोर संग जोड्न को लागी
आईफोन 5c चार्जिंग पोर्ट काम गर्दैन
मेरो आईप्याड स्क्रिन क्र्याक गरिएको छ! यहाँ रियल फिक्स छ।
तपाईको आईप्याडमा क्र्याक स्क्रिन छ र तपाइँ यसलाई मिलाउन चाहानुहुन्छ। यो जान्न गाह्रो हुन सक्छ कि तपाईको आईप्याड मर्मत विकल्पहरू कुन वा कुन तपाईको लागि उत्तम हो। यस लेखमा, म वर्णन गर्छु के गर्ने जब तपाइँको आईप्याड स्क्रिन क्र्याक हुन्छ तब तपाइँ यसलाई आज मिलाउन सक्नुहुन्छ !
तपाईंको आईप्याडलाई नोक्सान पुर्‍याउनुहोस्
यो मूल्या to्कन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँको आईप्याड स्क्रिन कतै नराम्रोसँग क्र्याक भएको छ जहाँ यसलाई मर्मत गर्नुपर्दछ भनेर निर्णय गर्नु अघि। यदि स्क्रिन पूर्ण रूपमा बिग्रिएको छ भने, तपाईं सायद यसलाई पछि चाँडै मर्मत गर्न चाहानुहुन्छ।
यदि प्रदर्शनको सानो भाग मात्र क्र्याक गरिएको छ भने, तपाईं केवल योसँगै बस्न सक्नुहुन्छ। मसँग मेरो आईफोनaमा एउटा सानो क्र्याक थियो जुन म कहिले स्थिर भएन। केही समय पछि, म लगभग त्यहाँ बिर्सन्छु! साना, पातलो क्र्याकहरूले सामान्यतया तपाईंको आईप्याडमा गर्न सक्ने र गर्न नसक्ने कुरालाई असर गर्दैन, तर तिनीहरू पक्कै पनि आँखा फ्याँक्न सकिन्छ।
यसबाहेक, यदि तपाईं कहिले पनि आफ्नो आईप्याडमा व्यापार गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ वा कसैलाई बेच्नुहुन्छ भने तपाईंले सायद यसको मर्मत गर्नुपर्नेछ। तपाईं आफ्नो आईप्याड मा व्यापार गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्न यदि यसको क्र्याक स्क्रिन छ, र तपाईं एक पुनर्विक्रय मूल्य को रूप मा उच्च प्राप्त छैन यदि तपाईं एक कम-भन्दा उत्तम प्रदर्शन संग यो बेच्ने प्रयास गर्नुभयो भने।
धेरै दुर्लभ परिस्थितिहरूमा, एप्पल सक्छ तपाईको आईप्याडको डिस्प्ले नि: शुल्क मर्मत गर्नुहोस् यदि योसँग सानो, एकल हेयरलाइन क्र्याक छ भने। यदि तपाइँको आईप्याड यस कोटी मा पर्दछ, र यो एक AppleCare + सुरक्षा योजना द्वारा कवर गरिएको छ, एप्पल स्टोर मा आफ्नो भाग्य प्रयास गर्न को लागी यो तपाइँको लायक हुन सक्छ। केवल एक नि: शुल्क मर्मतको आशामा नजानुहोस्, किनकि यस्तो प्रायः कहिँ हुँदैन।
तलको अनुच्छेदहरूमा, म तपाईको आईप्याड मर्मत गर्नु अघि तयार पार्ने कुरा गर्छु र केहि राम्रो कम्पनीहरूको सिफारिस गर्दछ जसले यसको क्र्याक स्क्रिनलाई सकेसम्म चाँडो सच्याउन सक्छ!
तपाइँको आईप्याडको ब्याक अप गर्नुहोस्
तपाइँको आईप्याडको ब्याकअप सुरक्षित गर्नु अघि यसको स्क्रिन मर्मत गर्नु राम्रो उपाय हो। यस तरिकाले, यदि यो ठीक हुँदै गइरहेको छ भने केही गलत भयो भने, तपाईंले आफ्नो कुनै पनि डाटा वा व्यक्तिगत जानकारी गुमाउनु हुने छैन।
तपाईंको आईप्याडको ब्याक अप राख्न यसलाई तपाईंको कम्प्युटरमा जडान गर्नुहोस् र आईट्यून्स खोल्नुहोस्। आईट्यून्सको माथिको बाँया कुनामा आईप्याड बटन क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् आहिले संचित गर ।
हाम्रो YouTube भिडियो जाँच गर्नुहोस् यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने आईकक्लाडमा तपाईंको आईप्याड ब्याक अप गर्नुहोस् सेटिंग्स अनुप्रयोग बाट!
कसरी आईफोन मा सबै भ्वाइसमेल मेटाउन
पर्दा कभर गर्नुहोस्
प्याकिंग टेप वा ठूलो ziplock ब्यागको साथ क्र्याक गरिएको स्क्रीन अपग्रेड गर्न कभर गर्नु यो राम्रो विचार हो। त्यसरी, तपाईंले गल्तिले गिलासको एउटा धारिलो टुक्रामा आफैंलाई काट्नु हुन्न!
तपाईंको मर्मत विकल्पहरू तुलना गर्दै
तपाईंसँग केहि राम्रो मर्मत विकल्पहरू छन् जब तपाईंको आईप्याड स्क्रिन क्र्याक हुन्छ। यदि तपाइँको आईप्याडको लागि एप्पलकेयर + संरक्षण योजना छ भने, तपाइँको पहिलो यात्रा सम्भवतः एप्पल स्टोरमा हुनुपर्दछ। तपाईंको एप्पलकेयर + योजनाले तपाईंलाई दुई घटनाहरूको लागि समावेश गर्दछ, तर तपाईंलाई $ 49 सेवा शुल्क लगाइनेछ।
तिमी सक्छौ तपाईंको एप्पल स्टोरमा अपोइन्टमेन्ट सेट अप गर्नुहोस् अनलाइन बस यो निश्चित गर्नको लागि तपाईले सबै दिन स्टोरको वरिपरि उभिनु हुँदैन। एप्पलसँग मेल-इन मर्मत कार्यक्रम पनि छ, जुन राम्रो विकल्प हो यदि तपाईं १-२ हप्ताको बदलाव समयलाई ध्यान दिनुहुन्न भने।
दुर्भाग्यवश, एप्पल आईप्याड मर्मत गर्न सक्छन् धेरै महँगो छ यदि तपाईं एप्पलकेयर + छैन। नयाँ आईप्याडमा मर्मत गर्न यति लागत लाग्न सक्छ $9! यदि तपाईं कम खर्चिलो विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ भने, म यो सेवाहरूको सिफारिश गर्दछु नाडी , एक मा मांग मर्मत कम्पनी। तिनीहरू तपाईं समक्ष आउँनेछन् र तपाईंको क्र्याक आईप्याड स्क्रिन स्प्याट-स्प्याटमा फिक्स गर्नुहोस्।
के म मेरो आफ्नै पर्दा बदल्न सक्छु?
तपाईं आफैंमा क्र्याक आईप्याड स्क्रिन बदल्न को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ, तर म यसलाई प्रयास गर्न सिफारिस गर्दिन। आईप्याडको मर्मत गर्नु एउटा अविश्वसनीय गाह्रो काम हो जुन उपकरणको विशेष सेटको आवश्यक हुन्छ।
यसबाहेक, एप्पलले दिन बचत गर्दैन यदि तपाईं आफ्नो आईप्याड फिक्स गर्ने प्रयास गर्दा गल्ती गर्नुहुन्छ भने। यो खोल्ने बित्तिकै तपाईको एप्पलकेयर + वारेन्टी भोर हुन्छ। यदि तपाइँ तपाइँको आईप्याड एक एप्पल स्टोरमा ल्याउन को लागी प्रयास गर्नुहुन्छ र एक एप्पल टेकले देख्छ कि तपाईले आफ्नो आईप्याड खोल्नुभएको छ भने, तिनीहरुले यसलाई तपाईका लागि ठीक गर्न अस्वीकार गर्नेछन्।
लामो कथा छोटो, तपाईको क्र्याक आईपड डिस्प्ले आफैमा सुधार गर्ने प्रयास नगर्नुहोस् जबसम्म तपाईसँग स्क्रीन बदल्ने अनुभव छैन र तपाईको एप्पलकेयर + योजना शून्य गर्न डराउनु हुन्न।
क्र्याक ए मुस्कान, तपाईंको आईप्याड फिक्स हुनेछ!
अब तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको क्र्याक आईप्याड स्क्रिन सकेसम्म चाँडो फिक्स गर्नका लागि के गर्ने। म आशा गर्दछु कि तपाईले लेख लेख्नु भएको छ कि तपाईको परिवार र साथीहरुलाई के गर्न को लागी तिनीहरूको आईप्याड स्क्रिन क्र्याक गर्न को लागी सिकाउन को लागी साझा गर्न! तपाइँको आईप्याडको बारेमा अरू कुनै प्रश्नहरू तल टिप्पणी सेक्सनमा तल छोड्नुहोस्।
पढ्न को लागी धन्यवाद,
आईफोन इयर स्पीकरले काम गरिरहेको छैन? यहाँ फिक्स छ!
50 साँच्चै प्यारा नामहरु तपाइँको प्रेमिका लाई कल गर्न को लागी - शीर्ष रोमान्टिक उपनाम
सिम आईफोनमा समर्थित छैन? यहाँ फिक्स छ!
के मैले नयाँ आईफोन एसई २ किन्नु पर्छ? यहाँ सत्य छ!
नियन्त्रण केन्द्र आईफोनमा काम गरिरहेको छैन? यहाँ फिक्स छ!
बस होस्ट कुपन कोड | हाम्रो अनन्य प्रोमो कोड, मार्च २०२१ मा कार्यरत!
डेकेयर फ्लोरिडा (स्पेनिश मा) को लागी 45 घण्टा कोर्स
किन मेरो आईफोन गलत एप्पल आईडीको लागि सोधिरहेको छ? यहाँ फिक्स छ!
मेरो आईफोन मरिसक्यो! यहाँ रियल फिक्स छ।
मेरो आईफोन टच स्क्रिनले काम गरिरहेको छैन! यहाँ फिक्स छ।
मेरो आईफोन ब्लुटुथसँग जोडिने छैन! यहाँ तपाईं एक प्रभावी समाधान पाउनुहुनेछ!
म कसरी एक आईफोनमा मेरो आईफोन खोज्न बन्द गर्ने? यहाँ फिक्स छ!
आईफोनले भन्छ 'तपाईंको सिमले एक पाठ सन्देश पठायो'? यहाँ वास्तविक फिक्स छ!
आईओएस १२ मा आईक्लाउडमा आईफोन ब्याकअप कसरी गर्ने: द्रुत मार्गनिर्देशन!
म कसरी मेरो आईफोनमा केन्द्र नियन्त्रण गर्न बटनहरू थप्ने? वास्तविक मार्ग!
मेरो आईफोनले मेरो प्रिन्टर फेला पार्न सक्दैन! यहाँ रियल फिक्स छ।
किन मेरो आईफोनको ब्याट्री यति छिटो ड्रेन भइरहेको छ? यहाँ अन्तिम समाधान छ!
कसरी २०२० मा एक WordPress वेबसाइट बनाउने: शुरुआती ट्यूटोरियल
यसको मतलब के हुन्छ जब तपाइँ जोकरहरु को बारे मा सपना देख्नुहुन्छ?
किन मेरो आईफोन ब्लुटुथ अन गरिरहन्छ? यहाँ सत्य छ!